सन्तोष घिमिरे सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 7026 पटक पढिएको
भ्रमणप्रति कतार असन्तुष्ट
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भ्रमणमा नजान दिएको सुझाव बिपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार युएई भ्रमणमा निस्कँदैछिन्। परराष्ट्रमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई चुनाव नजिकै आउन लागेको तथा गहिरिँदो खाडी संकटको बेला युएई भ्रमणमा जानु ठिक नहुने सुझाव केही साता अघि दिएका थिए।
‘यो युएई भ्रमणमा जाने बेला होइन विचार गर्नुस् भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको थियो। तर राष्ट्रपतिले मान्दै मान्नु भएन', प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो। राष्ट्रपतिकै जोडबलमा युएई भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको स्रोतले बतायो। कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रपतिले विदेश भ्रमणको चाहना राखेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार चाहीं गरेनन्।
‘राष्ट्रपति ब्यक्ति मात्र नभएर संस्था पनि हो। संस्थाप्रति सम्मान गरेर भ्रमण नरोकिएको हो' जानकार सरकारी अधिकारीले भने। राष्ट्रपतिका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.मदनकुमार भट्टराईले चाहीं प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिलाई युएई भ्रमण नगर्न सुझाव आएको बारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘मैले थाहा पाएसम्म प्रधानमन्त्रीबाट त्यस खालको कुनै सुझाव राष्ट्रपतिलाई आएको छैन', उनले भने। उनले युएईसँग उच्चस्तरको भ्रमण आदानप्रदानले सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग मिल्ने बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले समेत संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित अन्य खाडी मुलुकले कतारलाई नाकाबन्दी गरिरहेका बेला भ्रमणमा जानु उपयुक्त नहुने सुझाव अनौपचारिक रुपमा राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए। ‘राष्ट्रपतिलाई भ्रमण नगर्न पटक—पटक सुझाव दिएका थियौं। तर राष्ट्रपति कार्यालयले भ्रमण अघि बढाउन निरन्तर ताकेता गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो' मन्त्रालयका एक बरिष्ठ अधिकारीले भने।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा युएई मात्र नभई कुनै पनि खाडी मुलुक भ्रमण नगरेको भए राम्रो हुने सन्देश राष्ट्रपतिलाई विभिन्न च्यानलबाट दिइएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘यो बेला युएई भ्रमण गर्दा त्यसले युएइको पक्षधरता लिएको सन्देश जानेछ। जसका कारण स्वाभाविक रुपमा नेपाली कामदारको मुख्य रोजगारीको गन्तब्य रहेको कतार हामीसँग चिढिन्छ', अर्का एक सरकारी अधिकारीले भने।
नेपालका राष्ट्रपतिको युएई भ्रमणप्रति अर्को खाडी मुलुक कतारले कुटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि जनाएको छ। दोहास्थित नेपाली राजदूत रमेश कोइरालालाई शनिबार टेलिफोन गरी कतारी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले भण्डारीको युएई भ्रमणप्रति असन्तुष्टि पोखेको दूतावास स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो।
दोहास्थित नेपाली राजदूत कोइरालासँग कतारी अधिकारीले ‘हामीले पहिले नै दिएको निमन्त्रणा नेपालले वेवास्ता गरिरह्यो। तर हामीसँग दुस्मनी साँधिरहेको मुलुक युएईको भ्रमणमा चाहीं नेपालका राष्ट्रपति एकाएक किन जान लागेको ? ' भनेर सोधेको स्रोतले बतायो।
‘अहिले युएई राष्ट्रपति जानु भनेको कतारसंगको संबन्धलाई महत्व नदिइएको रुपमा बुझ्नु हुँदैन। हामीले कतारसँगको सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्व दिन्छौं' उनले भने। यसबेलाको राष्ट्रपतिको युएई भ्रमणलाई केही सरकारी अधिकारीले ‘बेमौसमको बाजा' को संज्ञा दिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी युएईको औपचारिक भ्रमणमा सोमबार निस्कँदैछिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आबुधाविका युवराजधिराज शेख मोहम्मद बिन जइद अल नह्यान र राष्ट्रपति भण्डारीबीच आउँदो मंगलबार द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ।
खाडीका साउदी र कतारभन्दा युएई नेपाली कामदारका लागि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित गन्तब्य मानिन्छ। युएई नेपालको ते श्रो ब्यापारिक साझेदार मुलुक पनि हो। युएईका ब्यापारीले नेपालको जलस्रोत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिनिधीमण्डलमा आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्द, राष्ट्रपतिका बिदेश मामिला विज्ञ डा. मदन कुमार भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
तीन ठूला पुल निर्माण अन्तिम चरणमा 813
मन्त्रालय मर्जर : कार्यविभाजन नियमावलीमा ढिलाइ 443
१७ न्यायाधीश छानबिनमा 2459
कांग्रेसको छाया सरकार : सबै मन्त्रालयका मन्त्री तोकिने 1970
काठमाडौं अब धुमपानमुक्त 2392
अब नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह 27222
गठबन्धनबाट डराउनु पर्दैन 434
पर्व र जीवनको रङ 404
वैश्य युगमा मिडियाका चुनौतीहरू 6829
एक्सनमा लालबाबुः तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग र अस्पतालमाथि कारवाही 2408
मिर्गौला पीडित गायिका जलजलालाई कोरियाबाट सहयोग 126
राहत पाउन दौडधुप 140
एक चक्की सिटामोल किन्न तीन सय खर्च 157
गुडिरहेको गाडीसँग पार्किङ शुल्क 340
मिलापत्र प्रयास विफल 225
इन्टरनेटमा फड्को 1857
सुन्दरीको एउटा ट्वीटले डुबायो एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ! 7735
१२ हजार स्वाइप मेसिन प्रयोग 1475
हुवावे नोभा टु आईमा ‘फेस अनलक’ र ‘एआर लेन्स’ 1573
अन्योलमा डिजिटलाइजेसन 3288
दसबर्से रणनीति बनाउँदै विज्ञान मन्त्रालय 1754